माधव नेपालको तीन प्रस्ताव : के ओली तयार होलान त ? - बिरगंज खबर
माधव नेपालको तीन प्रस्ताव : के ओली तयार होलान त ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि विश्वासको वातावरण अझै बनिनसकेको बताएका छन् । आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक’टमा परेपछि एकताको हता’रो गर्ने, तर फेरि अप’मानयुक्त अभि’व्यक्ति दिन नरोक्ने गरेको नेता नेपालले बताए ।आफू निकट नेताहरुसँग नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीको ‘आ’ममाफी’ दिने अभि’व्यक्ति जिब्रो चिप्लिएर मात्रै नआएको बताए । ‘आ’ममाफी जिब्रो चिप्लिएर निस्किएको होइन, त्यहाँ अहं’कार झल्कन्छ,’ नेता नेपालको निष्कर्ष छ ।
आफू पार्टी एकताको निम्ति उभिएको उनले बताएका छन् । ‘२८ फागुनमा केपी ओलीले हामी सबैलाई सामूहिक रुपमा निष्का’सन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर हामीले अर्धवि’द्रोह मात्रै गर्यौं, अलग पार्टी बनाएनौं,’ नेपालको भनाइ छ ।पार्टीभित्र सबैले सम्मानको अनुभूति गरेर मात्रै एकता हुने नेता नेपालको धारणा रहेको एक नेताले बताए । उनका अनुसार नेता नेपालले एमालेको दोस्रो अध्यक्ष नबन्ने अडा’न लिएका छन् । ‘तेस्रो अध्यक्ष त पहिले पनि प्रस्ताव गरिएको हो । अहिले दोस्रोमा के भिन्नता छ, यो मान्नै कुरै हुन्न,’ नेता नेपालको भनाइ छ । तार आफ्नो समूहका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका नेता नेपालले नेतृत्वबारे छलफल गर्न आफू तयार रहेको जनाउ दिएका छन् ।उनी निकट स्रोतका अनुसार नेता नेपालले पार्टी एकता कायम गर्न तीन विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।
दोस्रो नभएर समान हैसि’यतको अध्यक्ष हुनुपर्ने नेता नेपालको अडा’न छ ।साथै ओलीसँगै आफू अध्यक्ष नबन्ने उनले बताएका छन् । यदि दुई अध्यक्षमा सहमति भए वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अर्को अध्यक्ष हुने उनको प्रस्ताव छ । खनाल स्वास्थ्य सम’स्याका कारण अहिले दिल्लीमा उपचाररत छन् । ‘दुई अध्यक्ष हुँदा झलनाथ खनाल हुने उहाँ (माधव नेपाल) को कुरा छ,’ एक नेता भन्छन् ।उनको दोस्रो विकल्प अध्यक्ष मण्डल बनाउने छ । दशबुँदे सहमति जुटाएको कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका नेताहरुले भने ओली र नेता नेपाल नरहेर एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने तर्क गरिरहेका छन् । ‘उहाँहरु रहेर एमालेको एकता प्रक्रिया सार्थक बन्छ । व्यक्तिगत प्रस्ताव र आक्रो’शले होइन, सहमतिमै कुरा मिलाउँछौं,’ कार्यदलका एक सदस्य भन्छन् ।
ठाकुर पक्ष नेता सोनल ले एकाएक यस्तो भने, अबको बाटो यस्तो
बिदा बसेर कार्यवाहक तोक्न प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता गठबन्धनको सुझाव
नेविसंघले असारभित्रै पूर्णता पाउँछ : देउवा
निमा हेल्थ क्लिनिक